RQ Ring TOne | Ring Tones များအား Free ရယူပါ
RQ Ring TOne
Ring Tones များအား Free ရယူပါ
How To Download & Listen
link များပျက်နေလျင် အသိပေးပါ။
Ring Tone တောင်းရန်
SMS Tone များ
Entertainment 2.0 Feat. Juicy J,2Chainz & Nicki Minaj
Posted in hip hop Ring tone	by nayminthu
Limbo	Leaveacomment
J ME – I Luv Ur Sista @ RQ Ring Tones ( အသစ်ဗျ )
Ring Tone Artists
ဒီမှာ အရင်နားထောင်ရန် !!!
J me	Leaveacomment
Kiss Me Quick (Ft X Box)@RQ RING TONES
ရဲရင့်အောင်, ရဲရင့်အောင်	Leaveacomment
Maejor Ali – Lolly ft. Juicy J, Justin Bieber@ RQ Ring Tone
Lolly ft. Juicy J,
Justin-Bieber	Leaveacomment
So_what – FAR EAST MOVEMENT@ RQ Ring Tones
Far East Movement	Leaveacomment
Bobby soxer ရဲ့##အိမ်ထောင်ရှင်စိတ်ကူး ## Ring tones လေးပါ ( Free Download )
Bobby Soxer	Leaveacomment
Fuck da shit(Damage Wai,Seven,Kidd,Feat-Zay Gunn)
Posted in Uncategorized	by nayminthu
မိမိ ဟန်းဖုန်း ring tone အလန်းလေးတွေနဲ
အမြဲ လန်းနေနိုင်ဖို့ အတွက် RQ Ring Tone
မှ မေတ္တာ စေတနာဖြစ် ကူညီပေးနေပါသည်။
တင်ပြီးခဲ့သမျှ ပိုစ့်များ Select Category Alarms songs (10) ထိုင်လန် ရိုးရာ သံဇဉ်များ (1) မြန်မာ့ ရိုးရာ သံဇဉ်များ (6) Baby Cute ring tone (1) Dance Ring tone (43) Electric Effect Ring tone (10) funny Ring tone (14) hip hop Ring tone (64) HTC Window Song (1) i Phone Ring Tones (1) in Games background Ring Tone (1) K – POP Ring Tone (4) Korea Ring tone (9) Movies Ring Tone (2) Pop Ring tone (47) R & B Music ring tone (25) Remix Ring tone (18) Rock Ring tone (20) Samsung Galaxy S4 window song (2) SMS Ring Tone (3) The Best Of Ring TOne In August (1) The Best Of Ring TOne in July (1) The Best Of Ring TOne in September (1) Uncategorized (17) windows7(3)
သင့် Email ချန်ခဲ့ပြီး ပိုစ့်အသစ်များ ရယူပါ
Computer နဲ့ သုံးပြီး ကျတော်ရဲ့ ဒီ web ကို
နေ့ စဉ် မလာ ကြည့် နိုင်တဲ့ သူများအတွက်
တင်ထားမျှ Ring tone အသစ်များ ကို (Live )
တိုက်ရိုက် မိမိ Email အတွင်းသို့ ရရှိစေရန်
အထက်ပါ Brower အတွင်းသို့မိမိ EmaiL
ထည့်ပြီး Follow ပြုလုပ်လိုက်ပါ ထိုနောက်
မိမိ အီမေးထဲသို့Confirmed Email လေး
တစ်စောင် ပိုလိုက်ပါလိမ့် မည်။ ထိုနောက်
မိမိ အီမေးထဲ ၀င်ကာ အတည့် ပြုပေးပါ။
နောက်ဆိုလျင် တင်သမျှ ပိုစ့်များ အလိုလို
Email ထဲသို့အလိုလျောက် ပိုပေးပါမည်
For Fun Member Mobile App!!!
ကျတော်ရဲ့ဒီ web လေးက Computer နဲ့ အသုံး
ပြုသူများ အတွက်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်
သို့ သော် တစ်ချို့ မန်ဘာများ Mobile ဖြစ်ကြည့်ရင်
ဒေါင်းလော့ လုပ်သည့်အခါ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး
ထိုကြောင့် mobile ဖြစ် ကြည့်သူများ အထက်ပါ
App ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပြီး မိမိ ဖုန်းအတွင်း တွင်
Install ပြုလုပ်ပြီး Ring Tone များ ရယူ လိုက်ပါ
♥ The Best of RingTone in this August ♥
[ Dota Gamer များအတွက် DOTA Ring Tone ]
[ ရင်ထဲက ဂီတာ - လင်းလင်း (သံမဏိလိပ်ပြာ) ]
[ the best Remix ]
[ MY Remix ]
[ လွမ်းလွန်းလို့ - ရဲရင့်အောင် ]
[ Looking @ Me ]
[ One Direction - Best Song Ever ]
[ နတ်သက်ကြွေ - Bunny Phyo]
[ Change - Hyuna ]
[ မေ့လိုက် - ရဲလေး ကိကိ]
[ HEY Baby ( Pitpull & Tpain ]
ကျွန်တော့်Twitter ကို Follow လုပ်ပြီး ပိုစ့်များနေစဉ် ဖတ်နိုင်ပြီး
နောက်ဆုံး တင်ထားသည် ပိုစ့်များ
Entertainment 2.0 Feat. Juicy J,2Chainz & Nicki Minaj Download [www.rqringtone.wordpress.com] Advertisements
Ring Tone Artists J ME For You !! Download Listen ဒီမှာ အရင်နားထောင်ရန် !!!
Ring Tone Artists ရဲရင့်အောင် For You !! Download Listen ဒီမှာ အရင်နားထောင်ရန် !!!
Ring Tone Artists Lolly ft. Juicy J, Justin Bieber For You !! Download Listen ဒီမှာ အရင်နားထောင်ရန် !!!
Ring Tone Artists FAR EAST MOVEMENT For You !! Download Listen ဒီမှာ အရင်နားထောင်ရန် !!!
Ring Tone Artists Bobby Soxer For You !! Download Listen ဒီမှာ အရင်နားထောင်ရန် !!!
Ring Tone Artists Damage Wai,Seven,Kidd, Feat-Zay Gunn For You !! Download Listen ဒီမှာ အရင်နားထောင်ရန် !!!
EXO- k – MaMa
Ring Tone Artists EXO – K For You !! Download Listen [audio http://api.ning.com:80/files/7TcBzbi1eXqWZgxpoMoa0cF*PMmNehtXU1TV72YswmgPBkq9Mxhr3pMiDNphX8*58QwS*ezN4c3kjzIzwZgUBxHxNsYJo6v7/EXOMaMawww.rqringtone.wordpress.com.mp3 |bg=a5c208|righticon=6b00fc]
B.A.P – Hurricane [ Free Download ]
Ring Tone Artists B.A.P For You !! Download Listen [audio http://api.ning.com:80/files/7TcBzbi1eXoPWrYi-UfSc8WZNst9NxUiEMmdMyl2KJSWl8QTmI6C-v5CLneTxQWykltBOlgZkNb-GmjAyf0g-xSFtdirUbCR/B.A.PHurricanewww.rqringtone.wordpress.com.mp3 |bg=a5c208|righticon=6b00fc]
‘I Love You’ ATHENA OST – TAEYEON [ Free Download ]
Ring Tone Artists TAEYEON For You !! Download Listen [audio http://api.ning.com:80/files/7TcBzbi1eXointxZb1MjvuPNFen-gfF-2C8Bn1euJmgfLYUcNfRI-1dHLlms0x2kMN6mky0eV7laKlBpteNLSeR-8pnbQSrS/ILoveYouATHENAOSTTAEYEONwww.rqringtone.wordpress.com.mp3 |bg=a5c208|righticon=6b00fc]
ကြော်ငြာထည့်လိုသူ အတွက် ဆက်သွယ်ရန်
Email - nayminthu94@gmail.com
ph - 09425287090
လ အလိုက် တင်သည့်ပိုစ့်များ
လ အလိုက် တင်သည့်ပိုစ့်များ Select Month February 2015 (7) December 2013 (11) November 2013 (22) October 2013 (4) September 2013 (56) August 2013 (52) July 2013 (102) June 2013 (14)
Download Click now !!
i get man ♣-♣ baby calling(china) ♣-♣
Bird sing ♣-♣ Bubble ♣-♣
my heart will go on♣-♣ ဒကာလေးရေ ♣-♣
Cray-Frog ♣-♣ Dead body ♣-♣
who let dogs out ♣-♣ DJ NOKIA
♣-♣ Dadcandanc ♣-♣ BabyCrying [ DJ ] ♣-♣
Police DJ ♣-♣ ကရင်ဒိုး ♣-♣ DONALD
♣-♣ Fluffy Lacht ♣-♣ မြနန္ဒာ (ချစ်စမ်းမောင်) ♣-♣
yo yo ha ha ♣-♣ Dup [ FA ] ♣-♣
Hello Girl voice ♣-♣ Ambulance Siren ♣-♣
baby [arr ya yu pe] ♣-♣ Barcelona
caralarm ♣-♣ coco_di da di ♣-♣
ZZzzz ♣-♣ Doggy Style ♣-♣
Dog Vs Cat [DJ] Fire car ♣-♣
♣♣ gentel ♣-♣ Get Ready ♣-♣
Hello par par (china) ♣-♣ Glow ♣-♣
Gun ♣-♣ Dancer song ♣-♣
ကိုကိုလူဆိုး ♣-♣ ကယ်ကြပါအုန်းရှင် ♣-♣ KissBlowing
ကိုကို ဖုန်းလာနေတယ် ♣-♣
lalala ♣-♣ MISS YOU LIKE CRAZY ♣-♣ Mission Impos
2NE19One ALarms ring tone angle baby cute BaChit & CYkolamp Becky G & pitbull Big Bang BIGBANG Black Eyed Peas Bob Acri Bobby Soxer BONEY M; bunny phyo Charice feat Iyaz cool Ring Tone Cool SMS Tone CRISPY Dance DJ REMIX Eminem Evanescence EXO Far East Far East Movement Feat2Chainz Firefly funny Ring tone Gangnam Gummy Style ghost good morning Green Day haha funny man HTC Explorer 310A Hyuna Idiots in games internet songs jennifer Lopez & pitbull J Ki Feat & ကြည်ဖြူဖြူနိုင် J me j me ၊ ရဲလေး ၊ ကြက်ဖ Justin-Bieber kesha La Bouche L sai Zee & Yone Lay One Direction pitbull Pitbull ft & T-Pain Psy Remix Rings R ဇာနည် Samsung Galaxy S4 Shwehtoo SMS Tone snare The Best Of Ring TOne in July Tokyo Drift Remix လေးပါ.. wake up sound Westife whine Up windows7ကရင်ဒိုး ကိုအောင်ကိုလတ် & စံဒီမြင့်လွင် ချမ်းချမ်း စိုင်းစိုင်းခန့် လှိုင် ဆိုတေး နီနီခင်ဇော် &9One နီနီခင်ဇော် & အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့် ပူစူး ဘန်နီဖြိုး ဘန်နီဖြိုး & ဆိုတေး မိစန္ဒီ မျိူးကြီး ရန်ရန်ချမ်း & J me ရသ ၊ ဘိုလေး ၊ ချမ်းအေးဝင်း ရိမ်းမိုး ရဲရင့်အောင် ရဲရင့်အောင် ရှမ်းရိုးရာ တီးတီလုံးများ လင်းလင်း သားဆိုး သားကြီး ဟန်ထူလွင် အင်တာနတ်သီချင်းများ အာဇာနည် အိုင်းရင်း ဇင်မာမြင့်ီဲDJ-Jumpe ကောင်မလေး ကောင်းကောင်း ကျော်ထွဋ်ဆွေ နေမင်းသူ ဖော်ကာ လေးဖြူ အေသင်ချိုဆွေ ဖြူဖြူကျော်သိန်း မြန်မာ့ ဒိုပတ် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း သြရသ & ခင်စုစုနိုင်
လူအကြိုက်အများဆုံး RING TONE များ